Dhageyso: DF Soomaaliya wax kaalin ma ku lahayd sii daynta QALBI-DHAGAX? - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: DF Soomaaliya wax kaalin ma ku lahayd sii daynta QALBI-DHAGAX?
Dhageyso: DF Soomaaliya wax kaalin ma ku lahayd sii daynta QALBI-DHAGAX?
Muqdisho (Caasimada Online) – Suldaan Fowzi Maxamed Cali oo ah Suldaanka Qalbi-Dhagax, isla markaana gurigiisa uu ku sugan yahay Qalbi-Dhaga, ayaa wareysi uu siiyey idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho, waxa uu ku sheegay in iyada oo aan wax shuruud ah lagu xirin xabsiga laga sii daayey Qalbi-Dhagax.
Sidoo kale Cabdi Kariin Qalbi-Dhagax, ayaa xaqiijiyey in xabsiga laga siidaayey, islamarkaana uu ku sugan yahay guri ku yaalla magalada Addis-Ababa ee xarunta dalka Itoobiya.
In kastoo xilligaan aan weli loo ogolaan in uu warbaahinta la hadlo Qalbi-Dhagax ayuu sheegay in maalmaha soo socda uu hadli doono, islamarkaana uu shaacin doono xarigiisa sababtii uu ku yimid iyo cida ka dambeysay siideyntiisa.
Suldaan Fowzi Maxamed Cali oo la weydiinay su’aal aheyd ayaa sabab u ahaa in Qalbi-Dhagax la siidaayo? Ayaa sheegay in ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu ka dambeeyey sii deynta, waxa uuna intaas ku daray in dowladda Soomaaliya aysan wax lug ah ku laheyn sii dayntiisa.